Maxamed Saalax oo ka hadlay kulanka adag ay ku wajihi doonaan Man City garoonka Anfield – Gool FM
Maxamed Saalax oo ka hadlay kulanka adag ay ku wajihi doonaan Man City garoonka Anfield
(Liverpool) 09 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Masar ee Maxamed Saalax ayaa ka hadlay kulanka adag ay habeen dambe Axada kula ciyaari doonaan Man City garoonka Anfield, ciyaartan ayaana ka tirsan kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa la fahansan yahay in ciyaartan ay ku soo gali doonto iyadoo leh himilo sarre, si ay u sii dheereysato farqiga dhibcaha ee u dhexeeya iyaga iyo Manchester City, si ay u hanato horyaalka Premier League mudo 30 sano kaddib.
Haddaba Maxamed Saalax ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Liverpool Echo” ayaa wuxuu kaga hadlay kulanka ay habeen dambe ay wajihi doonaan Man City wuxuuna yiri:
“Xitaa hadii aan badino kulanka Axada, kama dhigna inaan ku guuleysanay koobka horyaalka, howsha wali wey fog tahay”.
“Haddii aan badinno Axadda isla markaana aan guuldareysano labo kulan kale waxaan ku jiri doonaa dhibaato weyn, sidaas darteed dhamaadka wadada safarkeena wali waa mid fog”.
RASMI: Liiska xulka qaranka Uruguay oo lagu dhawaaqay… (Miyuu ku jiraa Luis Suarez?)